Chelmo - LipIce Karaoke Contest မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ
LipIce Karaoke Contest မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ
အိမ့်ချစ်ရဲ့ "ချစ်ပန်းနှုတ်ခမ်း" သီချင်းလေးနဲ့ အတူ Karaoke ပြိုင်ပွဲလေးကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရအောင်နော်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link တွင် လျှောက်လွှာတင်နိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လျှောက်လွှာ (Entry Page) တွင်လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။သီချင်းအပြီးတွင်လည်း "Entry Form" Link ကိုနှိပ်ပြီး လျှော်လွှာ တင်နိုင်တယ်နော်။
၀၁. အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၂၈ နှစ် အတွင်း မိန်းကလေးများသာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (အိမ်ထောင်မရှိ၊ အပျိုဖြစ်ရမည်။ အုပ်ထိန်းသူ သဘောတူညီမှု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်)
၀၂. LipIce Myanmar မှ သတ်မှတ်ထားသော သီချင်းဖြင့်သာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်။ (ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်တွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်း နှင့် "ချစ်ပန်းနှုတ်ခမ်း" သီချင်း နှစ်ပုဒ်အား သီဆိုရမည်ဖြစ်သည်)
၀၃. အခြားသော သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိပြီးသူများနှင့် တေးစီးရီးထုတ်လုပ်ပြီးသူများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။
၀၄. ပဏာမရွေးချယ်ထားသူများနှင့် နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသည် လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ချိန်ကာလအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်သာ ကျခံရမည်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အဖွဲ့အစည်းမှ လုံးဝတာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
၀၅. မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်သူများသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၀၆. ROHTO မိသားစုများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။
LipIce Facebook Page တွင်ပြိုင်ပွဲဝင် လျှောက်လွှာတင်ရမည်။ လျှောက်လွှာများထဲမှ ပဏာမပြိုင်ပွဲဝင်များကို ဖုန်းဖြင့် အသံစစ်ဆေးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သူများကိုသာ ပြန်လည် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပဏာမ ရွေးချယ်ထားသူများကို ရန်ကုန်မြို့တွင် လူတွေ့အသံစစ်ဆေးပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဇကာတင် ၂၀ ဦးကိုထပ်မံ ရွေးချယ်ပါမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းမှာ LipIce Facebook တွင်ဖော်ပြထားသော သီချင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သီးချင်းဆိုစဉ် နှစ်သက်ရာ Peformance များဖြင့် တင်ဆက်ပြသမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲတွင် "ချစ်ပန်းနှုတ်ခမ်း" သီချင်းနှင့်အတူ၊ မိမိနှစ်သက်ရာ သီချင်းတစ်ပုဒ် စုစုပေါင်း သီချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
09 43105307, 09 799555315, 09 9977946020, 09 9977946021